बरु भोकै बस्न सकिन्छ तर सेक्सविना बाँच्न सकिन्न ! – Annapurna Post News
April 30, 2022 sujaLeaveaComment on बरु भोकै बस्न सकिन्छ तर सेक्सविना बाँच्न सकिन्न !
साउथ अभिनेत्री सामन्था रुथ प्रभु आजकल आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र व्यावसायिक जीवनका कारण चर्चामा छिन् । सामन्था आफ्नो बोल्ड स्टाइलका लागि परिचित छिन् ।
यससँगै उनी आफ्नो सौन्दर्यका कारण पनि चर्चामा आउने गर्छिन् । चलचित्र पुष्पामा सामन्थामाथि छायांकन गरिएको ‘ओ अन्तावा’ गीत निकै चर्चामा रहेको छ । यो गीतमा सामन्थाले निकै बोल्ड डान्स मुभ देखाएकि छिन् ।
सामन्था सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै सक्रिय देखिन्छिन् र खुलेरै आफ्ना विचारहरू फ्यानहरूसँग शेयर गर्छिन् । तर सामन्थाको यो स्टाइलका कारण उनी पटकपटक समस्यामा परेकी छन् । यद्यपि, सामन्था यी समस्याहरूको सामना गर्न पछि हट्दिनन् र ट्रोलहरूलाई पनि राम्रोसँग जवाफ दिन्छिन्। सन् २०१७ मा सामन्थाले जस्ट फर वुमन नामक म्यागजिनलाई अन्तर्वार्ता दिइन्। र्यापिड(फायर राउन्डमा, उनलाई सेक्स र खाना बीच छनौट गर्न भनियो ।
सुरुमा अलिकति हिचकिचाए पछि उनले एक दिन भोकै बस्न सकिने तर सेक्सबिना बाँच्न नसक्ने भन्दै खाना भन्दा पनि सेक्स रोजिन् । यसपछि ठुलो विवाद सुरु भएको थियो किनकी हाम्रो समाजमा यसबारे खुलेर कुरा गर्नु वर्जित जस्तै छ । तर सामन्थाले पनि साहसका साथ विवादहरू संग लडिन् । यसका साथै, उनी प्रायः सामाजिक सञ्जाल मार्फत धेरै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा आफ्नो पोइन्ट कसरी राख्ने जान्दछिन्। सामन्था साउथकी शीर्ष अभिनेत्री हुन् र उनले आफ्नो फिल्मी करियरमा अहिलेसम्म ६५ भन्दा बढी फिल्ममा काम गरिसकेकी छिन् ।
सामन्थाले दुईवटा स्टार्टअपहरू पनि चलाउँछन्, जसमध्ये एउटा फेसन लेबल साकी हो र अर्को प्रि(स्कूल एकम हो। सामन्थाले गरिब बालबालिकाको शिक्षामा केन्द्रित हुने शैक्षिक संस्था पनि खोलेकि छिन् । सामन्थाले एउटा फिल्ममा काम गर्न करिब २ करोड भारु लिन्छिन् । उनको कार कलेक्शनमा ७६ लाखको बीएमडब्लु पनि समावेश छ । सामन्थाले दिनरात मिहिनेत गरेकी छिन् र यो स्थानमा पुग्न निकै संघर्ष गर्नुपरेको छ ।
एउटा समय थियो जब एक पटकको खाना खाने पैसा पनि थिएन । १२ कक्षासम्म पढेपछि परिवारसँग पैसा थिएन । यस्तो अवस्थामा सामन्थाले सानै उमेरमा काम गर्न थालेकी थिइन् र उनलाई मोडलिङमार्फत फिल्मको अफर आएको थियो । उनले ११ वर्षअघि ‘ये माया चेसावे’ मा पहिलो पटक काम गरेपछि पछाडि फर्केर हेर्नुपरेन ।
सत्ता गठबन्धन भत्काउन भरतपुरमा उठाइयो बागी, चिनियाँ राजदूतको पूर्ण साथ